vedicdarpan – Page3– Astrology & horoscope
वैदिक कर्मका वैज्ञानिक आधार
व्रत किन ? शरीरको माध्यमबाट मानिसले अपार सम्भावनाको विकास, धर्मसाधना र सम्पूर्ण श्रमका कामहरू गर्न सक्दछ । सृजना र विकासको स्रोत मानवचेतनाभित्र रहेको हुन्छ । हृष्टपुष्ट र तन्दुरुस्त मानिसले मात्र सम्पूर्ण काम राम्ररी गर्न सक्दछ । स्वास्थ्यका लागि भोजन अनिवार्य आवश्यकता हो । भोजनविना मानिस केही दिन पनि स्वस्थ रहन सक्दैन । पाचनक्रिया सबल, सशक्त र सही भयो भने मात्र मानिसले सुस्वास्थ्य र दीर्घायु प्राप्त गर्न सक्दछ । स्वास्थ्यका लागि उपवास अनिवार्य हुन्छ । पाचनक्रियाले प्रत्येक दिन विभिन्न कठोर रसदार भोजनहरू पचाइराखेको हुन्छ । त्यसैले पाचनक्रिया कमजोर हुने गर्दछ । पाचनक्रिया र आँतलाई पनि हप्ता या पक्षमा एकपल्ट खाली राख्नुपर्दछ...
घर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाउँदा कर्पाेरेट वास्तुअनुसार निर्माण गरेमा महŒवपूर्ण व्यापारिक सफलता प्राप्त हुन्छ । कर्पाेरेट वास्तुअनुसार अफिसमा कुन र कस्तो खालको वास्तु प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा तल उल्लिखित बुँदाहरू महŒवपूर्ण रहेका छन् । कार्यालयको भित्री बनावट ड्ड दक्षिणपूर्वमा भान्साकोठा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । ड्ड उत्तरपूर्वमा पानीको श्रोत ईनार, पानीको ट्याङ्की, धारा, कल आदि बनाउनु राम्रो हुन्छ । ड्ड दक्षिण पश्चिम दिशामा मूल व्यक्तिको सुत्नेकोठा बनाउँदा आरामदायी निद्रा आउने हुन्छ । ड्ड शौचालयमा पूर्व या पश्चिम फर्केर बस्नुहुँदैन । ड्ड छतमा पानीको ट्याङ्की पश्चिमपट्टी राख्दा शुभ रहन्छ । ड्ड बच्चाहरूको सिरान पूर्वपट्टी बनाउनु पर्दछ । ड्ड बच्चाहरू सुत्ने कोठामा टेलिभिजन तथा...
वैदिक विज्ञान र आधुनिक विज्ञान
—डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्री ब्रह्माण्डका सबै जीवित प्राणी र निर्जीव पदार्थको शारीरिक संरचना, बनावट र प्राकृतिक सन्तुलन ब्रह्माण्डमा निहित रहेको शक्तिमा केन्द्रित छ । ब्रह्माण्डमा रहेको सन्तुलित शक्तिलाई ऋषि–महर्षिहरूले वेद र वैदिक वाङ्मयमा प्रष्ट पारेका छन् । प्राकृतिक सन्तुलन भन्नाले सबै जीवित प्राणी तथा निर्जीव पदार्थहरूको उत्पत्ति, विकास, विकासक्रमको निरन्तरता, स्थायित्व र विनाशलाई मान्न सकिन्छ । युगौंदेखि पढिने गरेका वेदका मन्त्र तथा ऋचा र वैदिक ज्ञानलाई ऋषि–महर्षिहरूले प्राकृतिक नियमको व्याख्या मान्दछन् । वेद एक संस्कृत शब्द हो । संस्कृतमा विद ज्ञाने धातुबाट वेद शब्द बन्छ । जसको अर्थ ज्ञानको आलोक हुन्छ । वैदिक साहित्य एक प्राचीन साहित्य हो, जसलाई वैदिक गुरुकुल...
Posted in Gadgets Leaveacomment
Posted in Celebrity Leaveacomment
वास्तुका केही नियमहरू
वास्तुका केही नियमहरू वैदिक, पौराणिक कालमा निर्माण शास्त्रको महत्व अति विशिष्ट थियो । ठूला–ठूला भवन, राजप्रसाद, किल्ला, विद्यालय, देवालय वा मन्दिर, तलाउ, कुवा, वागबगैंचा आदि निर्माण गर्दा, वास्तुशास्त्रका नियमअनुसार गरिन्थ्यो । सनातन निर्माणको युग, ढुंगे युग, स्वर्णयुग, ताम्रयुग, लौहयुग, मृत्तिका युग, काष्ठयुग आदि युगहरुमा निर्माणको महत्व विशिष्टखालको रहेको थियो । त्यसपछिको केही समय भवन बनाउने कलाअन्तर्गत सुन्दरतालाई मात्र ध्यान दिने प्रचलन बढेर गयो । तर, आधुनिक समयमा वास्तुशास्त्रको पुनर्जागरण भएको छ । यहाँ वास्तुसम्मत भवन अथवा आवास निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही नियमहरु बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । कुनै पनि भूखण्डको परीक्षणका लागि विशेष गरी पाँच वस्तुलाई ध्यान दिनुपर्दछ— पृथ्वी,...
गुरु ग्रहको लागि पुष्पराज बुध ग्रहको लागि पन्ना शुक्र ग्रहको लागि हीरा चन्द्र ग्रहको लागि मोती सूर्य ग्रहको लागि माणिक्य मङ्गल ग्रहको लागि मूगा केतु ग्रहको लागि लहसुनियाँ शनि ग्रहको लागि निलम राहु ग्रहको लागि गोमेद मानव जीवनको सुगमताका लागि अनेकौं प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तुहरू निर्माण भएका पाइन्छन् । जसको सही सदुपयोगले मानव जीवन अत्यन्त समृद्धशाली सुखी र शान्त बन्न पुग्दछ । प्राकृतिक पदार्थ सदुपयोग नगर्नाले मानव जीवन अत्यन्त दुरूह, कष्टसाध्य र अभिशाप बन्न पुग्दछ । प्राकृतिक वा अप्राकृति वस्तु वा पदार्थको उचित स्थानमा उचित रूपमा प्रयोग गर्नु नै मानव जीवनको सर्वाेपयोगी लक्ष्य हो । यसैले मानवलाई सुखी बनाउँदछ । मानवलाई...
गणितको महŒव गणनाको विधान हुँदैनथ्यो भने कति ठूला समस्याहरू उत्पन्न हुन्थे होलान् ? ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न विश्वको सबैभन्दा प्राचीन लिपिबद्ध प्राप्त ज्ञान ऋग्वेदमा गणनाको विषयमा वर्णन गरिएको छ – ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे .. ऋग्वेद, २–२३–१ । यजुर्वेद २३–१९, तैत्तिरीय संहिता २–३–१४–३ । गणना शब्द आएको छ वेदमा । यसै सन्दर्भबाट गणितको विकासक्रमलाई बुझ्न सकिन्छ । गणित समस्त विज्ञानको मूल स्रोत हो । गणित नै सृष्टि रचनाको मूलमा छ । संसारका प्रत्येक वस्तु कुनै न कुनै नियमममा आबद्ध छन् । सृष्टिका प्रत्येक वस्तुमा गति छ । त्यो गतिलाई गणना गर्ने शास्त्र नै गणितशास्त्र हो । क्रमबद्ध ज्ञान गणितको विषय...